UK CPI (အင်္ဂလန် စားသုံးသူများ၏ ကုန်စည်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုများအတွက်ပေးချေမှု အခြေအနေ)
သြဂုတ်လအတွက် ဗြိတိန်စားသုံးသူဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ၂. ၉%အထိရောက်ရှိခဲ့ပြီး ထိုပမာဏသည် ၅နှစ်တာအတွင်း အမြင့်ဆုံးဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထိုကဲ့သို့ ဈေးကွက်အတွင်း စာသုံးသူများများပြားလာခြင်းသည် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကောင်းမွန်တိုးတက်လာသည်ဟု မှတ်ယူနိုင်သည့် အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း နောက်ထပ်အတိုးနှုန်းတင်မည့်ကိစ္စအား ဈေးကွက်ကမျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုတိကျသည့် လေသံ hawkishဒေတာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်.
အကယ်၍ ယခုထုတ်ပြန်မည့် CPIဒေတာသည် ဆက်လက်အားကောင်းခဲ့ပါက အင်္ဂလန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် တင်းကျပ်သည့် မူဝါဒများချမှတ်လာနိုင်ပါသည်. GBPတန်ဖိုးမှာလဲ ကာလတို အတက်ပြနိုင်ပါသည်. အကယ်၍ ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာများ ကျဆင်းလာခဲ့ပါက ပေါင်စတာလင်ငွေကြေး တန်ဖိုးကျဆင်းလာနိုင်ပါသည်.
14.11.2018 10:30 GBP ရောင်းဝယ်ရန် နောက်ထပ်အခွင့်အရေး
ဗြိတိသျှမှ လက်လီအရောင်းများ အဆင့်အား နိုဝင်ဘာ ၁၅ရက်၊ ၁၁:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မည်။
13.11.2018 10:55 ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဒေတာကိုကြည့်ပြီး USDရောင်းဝယ်ရန် အသင့်ပြင်ထားပါ။
အမေရိကမှ အောက်တိုဘာအတွက် လစဉ် စားသုံးသူဈေးနှုန်းအညွှန်းကိန်းများအား နိုဝင်ဘာ ၁၄ရက်၊ ၁၅:၃၀ MT အချိန်တွင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မည်။
07.11.2018 11:08 ဗဟိုအစိုးရမှတ်ချက်များ USDပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိလဲ?
ဗဟိုဘဏ် (Fed)မှ ၎င်း၏ အတိုးနှုန်းအား နိုဝင်ဘာ ၈ရက်၊ ၂၁:၀၀ MT အချိန်တွင် ကြေငြာသွားပါမည်။
usd federal reserve အတိုးနှုန်း ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး
13.12.2017 10:01 ဥရောပ ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲနှင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
12.01.2018 09:40 အမေရိကန်CPI & လက်လီအရောင်း ဒေတာ
အမေရိကန် CPI ဒေတာကို ဇန်န၀ါရီ ၁၂ရက် ၁၅:၃၀ MT အချိန်တွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်.
bitcoin ethereum သဘော အောင်မြင်သောဇာတ်လမ်း litecoin dash ပထဝီဝင် နိုင်ငံရေးပညာ နယူးယောက်မြို့ရှိ ငွေကြေးလုပ်ငန်းဗဟိုဈေးကွက် ထုတ်လုပ်သည် လူသုံးကုန် စီးပွားရေး ရောင်းဝယ်သူ၏ ဝေါဟာရ brl နယူးဇီလန် ဗဟိုဘဏ် try (တူရကီ လိုင်ရာ) thb (ထိုင်းဘတ်) လူတွေ့မေးမြန်း ဘလော့ချိန်း လူနေမှုဘဝ gold chf aud bitcoin forex exchange forex ပညာပေးသင်ကြားရေး ဥရောပ ဗဟိုဘဏ် အစည်းအဝေး သြစတြေးလျ အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာ mxn (မက္ကဆီကို ယွမ်) ရွေးကောက်ပွဲများ ဂျပန်ဘဏ် သြစတေးလျှ ဗဟိုဘဏ် စီးပွားရေး ပြက္ခဒိန် ရေနံ eur ကုနျသှယျရေး bitcoin အနုပညာရှငျကုနျသညျမြား nzd jpy အထိ ငွေရေးကြေးရေး ဇာတာခွင်ဟောကိန်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် အရောင်းအဝယ် စစ်ပွဲများ လက်လီရောင်းချသူများ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု zar (တောင်အာဖရိက ရန်) အခြေခံသုံးသပ်ချက်(fa) တရုတ် စက်မှုလုပ်ငန်း idr (အင်ဒိုနီးရှား ရူပီး) forex factory cad အပျော် ပညာရေး ဖြစ်ထွန်းမှု dow jones usd အာရှ နည်းပညာ(ta) သုံးသပ်ချက် trend အရောင်းအဝယ် ရောင်းဝယ်သူတိုင်း သိထားသင့်သည် သတင်းများနှင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း တောင် အာဖရိက ဘရာဇီး အင်္ဂလန်ဘဏ် စီးပွားရေး ဒေတာ forex signals try လှုံ့ဆော်မှု ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး forex ကုနျသှယျ gbp အတိုးနှုန်း အမြတ် ဂျာမနီ ထိုင်ဝမ် စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ဈေးနှုန်းများ လူသစ်များ အရောင်းအ၀ယ် ကျွမ်းကျင်မှုများ အောင်မြင်မှု ငွေကြေးများ cnh တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ် ကနေဒါ ဘဏ် show all